I-Ellicott Dredge Isiza Ukuthuthukisa Ukuzulazula Kwamanzi - Ellicott Dredges
I-Ellicott Dredge Isiza Ukuthuthukisa Ukuzulazula KwaseMarina
Isiko lika-Ellicott I-360SL swinging ladder dredge iyasetshenziswa kumaphrojekthi amancane amaningi ethekwini nasolwandle e-Oregon. Amaphrojekthi wokwemba kabusha, aqhutshwa yi-Oregon International Port of Coos Bay, azothuthukisa ukuzulazula eCharleston Marina Complex.
Ukwehliswa kabusha kwenzelwa eduzane nasePhoyinti Adams Facility kanye nasechwebeni likaRussell Marine. Umsebenzi uzoqinisekisa ukutholakala kwemikhumbi yokudoba ezentengiselwano nezokungcebeleka, futhi kulindeleke ukuthi iqhubeke kuze kube nguDisemba.
I-dredge yathengwa yi-State of Oregon e-2015 ukuze isetshenziswe ngokuhlanganyela yimiphakathi eminingi esogwini. U-Ellicott Dredges 'uRick Leverty, umphathi omkhulu wenkonzo yasensimini, uthe labo abaphethe opharetha nabalondolozi bajabule nge-360SL yangokwezifiso.
I-Series 360SL Swinging Dragon dredge iyi-swinging ladder dredge eklanyelwe ukusebenza eziteshini ezincane namaphrojekthi amancane. Le dredge eguquguqukayo ilungele amaphrojekthi wokubuyisela ahlanganisa ama-marinas, amachibi, namaphrojekthi wokubamba ezwelayo abucayi.
Umthombo: U-Ellicott Dredge, Okuhle.com